Ukukhethwa kwesigceme sokubeletha kungenye yemisebenzi ebalulekile yabazali esizayo ezinyangeni zokugcina zokukhulelwa. Uma sicabangela inhloko-dolobha, enye yezinto ezidingeka kakhulu namuhla yizibhedlela ezingu-17 eMoscow. Ihlinzeka ngezinsiza eziningi ezahlukene ezihlobene nokubukeka kwengane ekukhanyeni. Ukubuyekezwa mayelana nesikhungo sezokwelapha kungase kuzwakale kunengqondo kakhulu.
Umnyango wokubeletha № 17 uyisigungu sesibhedlela esibhedlela esibizwa ngokuthi uV V. Veresaev. Ngokokuqala ngqa iminyango yesikhungo sezokwelapha yavulwa ngoDisemba 1993. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-20, ochwepheshe besibhedlela sokubeletha bakwazi ukwenza abazali abangamakhulu bejabule. Ezinye izingane ezize emhlabeni manje zibuyela kwenye indima. Baba abadala futhi bahlela ukuzalwa kwezinsana zabo.
Isikhungo sezokwelapha sisezindaweni esakhiwe ingqalasizinda ethuthukile. Isibhedlela se-17 eMoscow sisekhelini: Umgwaqo waseMoscow oneminyaka engu-800 , indlu 22. Lesi yisakhiwo esivinjelwe nemibhede engu-165. Esikhungweni, umbhangqwana oshadile ungahamba kuzo zonke izigaba zokuhlela ukuzalwa komntwana. Izinsizakalo zekhwalithi zinganikezwa ngenxa yemishini yakamuva kanye nokuhlangenwe nakho kochwepheshe abaqeqeshiwe kakhulu.
Odokotela abangu-17 esibhedlela saseMoscow
Iningi lezingane lizalwa liphilile, futhi ngesikhathi sokubeletha, abesifazane abahlangabezane nezinkinga ngenxa yomsebenzi ongenakuqhathaniswa ochwepheshe besibhedlela sokubeletha. Ukubuyekeza okuningi okuhle kungase kuzwe ngo-Oveshnikov Tatiana Zosimovna. Lesi isazi sezifo-gynecologist sigaba esiphezulu neminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho. Ensimini yakhe, lochwepheshe usebeneminyaka engaphezu kwengu-30, ethuthukisa njalo amakhono akhe nolwazi. Kusukela ngoJuni 2015, uTatyana Zosimovna naye uhlanganyela emsebenzini wokuphatha. Udokotela usebenza njengephini lesikhulu lesidakamizwa sezinambuzane nezifo zomzimba.
I-Samchuk Pyotr Mikhailovich ingenye isazi esifanele ukudunyiswa. Ewebhu, ungathola izibuyekezo eziningi ezinhle mayelana nodokotela. Lokhu akulona nje umjozi wezifo zesigaba esiphezulu. Ungudokotela wesayensi yezokwelapha. Isazi sakha izindlela ezintsha zokulethwa, okuvumela ukugwema izinkinga ezimweni ezehlukene ezingajwayelekile.
Ukubuyekezwa okuningi okuhle kungase kuzwakale ngalezi zincazelo ezilandelayo: Fedotova Tatyana Vladimirovna, Kravtsova Elena Olegovna, Chanturia Nino Otarievna, Katyukhina Elena Gennadievna, njll.
Ngeshwa, ngezizathu eziningana, akunakwenzeka ukukhulelwa ingane ngendlela yokufundela yonke imibhangqwana. Ukuxazulula inkinga kusiza Roddom № 17 (Moscow). Ukubuyekezwa kubonisa ukuthi ochwepheshe bezikole baqala ukwenza konke ukuphulukisa ukungabi nabantwana. Ezimweni ezingenathemba, umndeni unikezwa ukusebenzisa amathuba okufaka umanyolo we-in vitro.
Emnyangweni we-IVF, isiguli ngasinye siqala ukuhlola kahle umzimba. Bese bobabili owesilisa nowesifazane baqeqeshwe ukuthatha izinto eziphilayo. Esikhathini esizayo, i-in vitro fertilization, lapho imibungu enamandla kunazo zonke ifakwa esibelethweni somama esizayo. Ukubuyekezwa kubonisa ukuthi ema-25% wamacala ukukhulelwa kulungiswa okokuqala.
Akuyona njalo ukukhulelwa kuyaqhubeka kahle. Abomama abaningi esikhathini esizayo kumele babhekane nezinkinga ezinkulu ezisongela ukuphathwa kwengane evamile. Isibhedlela esibhedlela samaNombolo 17 eMoscow sinayo yonke imithombo edingekayo yokusekela impilo yomama ozayo nomntwana. Umnyango usebenza i-laboratory ye-round-clock, evumela ukuthi ulandele ngokunamandla isimo sesiguli. Lapha, ngaphakathi kwesikhathi, ukuhanjiswa kwabesifazane kulesi sikhungo, okuhleliwe ukulethwa kwezidingo.
Okudingayo ukuthatha nawe uma ufaka esibhedlela sase-Moscow. Indawo esemthethweni iyinhlangano evumela ukuthi ukwazi ukuthola lonke ulwazi oludingekayo. Nasi uhlu lwezinto ezidingekayo, kufaka phakathi izingubo ezikhululekile, imikhiqizo yokuhlanzeka, ifoni ephathekayo. Okunye kuzohlinzekwa yisikhungo sezokwelapha.
Inhloko yesigceme sokubeletha nguFedotova Tatyana Vladimirovna. Udokotela usiza izingane ukuba zize emhlabeni, futhi zibhekene nemisebenzi yokuphatha. Umnyango unezibhedlela ezingu-14 ezihlukene zokubeletha. Abesifazane bangalindela ukuthi umntwana eze ezweni ngaphandle kokuphazamisana. Ukubaluleka kokuzalwa komlingani osanda kuzuza. Ubaba ongomuso angase abe khona enyunithi nomkakho ohlinzekwa nge-fluorography kanye nesitifiketi esivela ku-venereologist.
Ikhaya lokubeletha laseMoscow libuye lithandeke kubantu besifazane esifundeni. Isayithi elisemthethweni libala imibhalo oyidingayo ukuba ube nayo. Lokhu, okokuqala, ikhadi lokushintshanisa lokubeletha esikhathini esizayo. Kubalulekile futhi ukunikeza isitifiketi esijwayelekile nesitifiketi sezokwelapha.
Ukubuyekeza mayelana nesibhedlela esingama-17 eMoscow
Mayelana nesikhungo sezokwelapha singatholakala ikakhulukazi ukuphawula okuhle. Abesifazane babona induduzo yamakamelo, kanye nokuthokoza kwabasebenzi. Ubuchwepheshe obuphakeme abukona nje kuphela odokotela, kodwa futhi nabahlengikazi. Isibhedlela saseMoscow esibhedlela sokubeletha sendawo lapho umzuzu ojabulisayo wokubeletha komntwana ongagqanywanga yizixhobo zakudala nokuntuleka kwezimo zokuphila eziyisisekelo zomama ekubelethweni.
Kuyinto enhle ukuthi usizo lunganikezwa kulabo besifazane abangenayo inqubomgomo yomshuwalense. Ngesisekelo esikhokhelwayo, ukulethwa kwamakhosikazi angaphandle kwamanye amazwe kwenziwa, kanye nalabo abavela kwezinye izindawo zaseRussia. Kungenzeka ukuthi ukubukeka kwezingane emibhangqwaneni engenasifo ngenxa ye-IVF kungenye futhi okungenakungatshazwa kwesibhedlela sokubeletha esi-17 eMoscow.
"Umthombo omusha" - i-sanatorium eVologda
I-Bekhterev Psychoneurological Institute
I-Israel Isebenza Ngempumelelo
Inzuzo izinhlobo, imvelo kanye umsebenzi walo.
Black Widow, "The Avengers." Umlando Black Widow e "The Avengers"
Silhouette ahlabayo: ukudala izipho ngezandla zakho
Ukupheka sitrobheli mousse
Ikhukhamba zifakwe emanzini anosawoti: okuqukethwe kwama-kilojoule nezindlela sibalo zabo, kanye izakhiwo ezuzisayo yaleli yemifino
Uma esandleni sokudla itches, kungaba nguyiphi?